Cuntada oo Guriga la Keeni doono laga Billaabo Isniinta, April 20
Waxaynu adiga iyo qoyskaagaba u rajeyn roonaansho iyo bed-qab. Waxaynu kula socodsiinaynaa in isbeddel ku iman doono adeeggii cunto-bixinta ee qoysaska toddobaadka danbe laga billaabo April 20.
Jadwalka toddobaadkan (April 13-17) waa la mid kii hore, oo basasku waxay cuntada keenayaan Arbacada, Khamiista, iyo Jimcaha – iyo inay istaagi doonaan iskoollo xaddidan geeska meesha ay ardayda dhigaan subixii Jimcaha April 17.
Laga billaabo Isniinta, April 20, ma jiri doono bas cuntada keenayo meelihii uu subaxdii soo istaagi jiray. Taa beddelkeeda, waxaynu billaabaynaa in qoysaska SPPS ee cuntada u baahan aynu guriga ugu keenno toddobaadkiiba hal mar. Cuntada waxaa loogu talogalay keliya ardayda ah 18 jir iyo wixii ka yar, ama ardayda naafada ah ee dhigto iskool.
Qoysaska u qalmo cuntada bilaashka ah ama la qiimo dhimay:
Waxaa adigoon isqorin guriga laguugu keenayaa cuntada maalinka koowaad, markaas ayaad darawalka baska u sheegi kartaa in adeeggaas laguu sii wado oo guriga laguugu keeno cuntada. Waxaad sidoo kale arrinkaas ka caddeyn kartaa halkan spps.org/homedeliverysomali. Ardayda dhigato barnaamijka Community Eligibility Provision (CEP) iyaguna cuntada way helayaan maalinka koowaad iyagoon isqorin.
Qoysaska aan u qalmin qadada bilaashka ah ama qadada la qiimaha-dhimay:
Waxaad iska diiwaan-gelin kartaa lifaaqan spps.org/homedeliverysomali ama sug lagaa soo waco xafiiska Nutrition Services. Markii lagu soo waco, taleefanka adigoo ku jiro ayaad isdiiwaangelin kartaa xilligaas.
Qoysaska cuntada guryaha loogu keeni jiray:
Cuntada waa la idiin keeni, oo uma baahnidiin inaad isdiiwaangelisaan mar kale. Haddii aad codsaneysid in la beddelo cunto-keenidda ama aad rabtid inaad cusbooneysiisid xogta meesha lagaala soo xiriiri karo, fadlan email noogu soo diri ns@spps.org.
Waxaa sidoo kale jiri doono baass soo istaagi doono dhowr iskoollo hortooda kuwaasoo loogu talagalay dadka aan rabin in guriga cuntada loogu keeno balse doonayo inay iyagu iskoolka ka soo qaataan cuntada.
Waxaynu rajeyn in isbeddelladaan ay kordhin doonto cuntada ay qoysasku heli donaan iyadoo isla markaana la dhawrayo tilmaamayaasha amarkii barasaabka ee ahaa in guriga la joogo, dadkuna kala fogaadaan. Waad ku mahadsan tihiin sabirkiinna iyo taageeradiinna maadaama aynu isku dayayno arrin billaw ah oo cusub.
Fadlan ka warqab boggan spps.org/Page/38776 iyo wixii war ahee u dambeeay ee quseeyo qadada, iyo weliba saacadaha iyo goobaha laga qaadanayo.